Sidee Shaqo loo Helaa Ama Loo Abuuraa? W/Q Farxaan Maxamed Sultan (Rakad). – somalilandtoday.com
Sidee Shaqo loo Helaa Ama Loo Abuuraa? W/Q Farxaan Maxamed Sultan (Rakad).
Qofkasta oo dunida ku nooli wuxuu Jecel yahay innuu shaqo wanaagsan oo lacag badan helo se qofkasta oo dunida ku nooli ma laha aqoonta iyo xirfadda shaqo wanaagsan lagu helayo”
Intaad nooshahay saddex midkood unbaad noqon shaqaale, loo shaqeeye iyo iska fadhiya aan shaqaysan, inta badan dadka iyo caalamkuba laba ka mida ayay ku mashquulsan yihiin innay
noqdaan shaqaale iyo innay noqdaan loo shaqeeye.